Kanye phezu kwe-Tide- pristine& eduze nayo yonke into!
Wells, Maine, i-United States
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Rachel
Igqugquzelwe ugu lwaseMaine olumangalisayo nolunokuthula, i-Ance On a Tide yaklanywa ukwenza ukuvakasha kwakho kube intofontofo. Siyazi ukuthi ukuhamba kungakhandla, futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kungabi nazinkathazo ngangokunokwenzeka. Imayela nje ukuya ogwini nemizuzu emi-2 ukuya edolobheni lase-Ogunquit! Bheka ekhasini lethu ukuze uthole okwengeziwe mayelana nekotishi lethu elihlanzekile kanye nezinsiza zokungcebeleka ezingenakuqhathaniswa. Sibheke ngabomvu ukukwamukela maduze!
Leli kotishi elipholile linegumbi lelanga elipholile, indawo yokudlela enwetshiwe, izinto zokubala ze-granite kanye nezinto zikagesi eziphezulu ekhishini elisebenza kakhulu. Kunamagumbi okulala ayi-2 esitezi sokuqala anendawo yokubeka eningi, igumbi lokulala elingu-1 linombhede olingana nendlovukazi kanti igumbi lokulala eli-2 linemibhede engamawele emi-2. Ngaphandle kwekhishi kunendlu yokugezela eneshawa kanye newasha/isomisi sazo zonke izidingo zakho zokuwasha. Iladi lomkhumbi wangokwezifiso ekhishini lizokuholela endaweni ephakeme evulekile, i-The Captain's Quarters, lapho uzothola khona indawo evulekile enombhede wendlovukazi nendawo yokugcina izinto.
Kukhona igceke elingaphandle lokosa, igceke lezingane ezingalidlala kanye netafula elingaphandle nezihlalo- elilungele ukudla kwe-al fresco ngemva kosuku olude olwandle.
Once Upon a Tide is f-u-l-l-y igcwele noma yini nayo yonke into ongase uyidinge ukuze uthole iholide elihle laseMaine- kuze kufike ezihlalweni zasebhishi nasebhodweni lama-lobster.
Itholakala endaweni efiselekayo ye-GATED yaseSeaglass Village, jabulela izinsiza zokungcebeleka ezisezingeni lomhlaba ezihlanganisa namachibi amanzi anosawoti ashisayo angu-2 (umndeni kanye no-18+), ichibi lezingane/ojahidada, ichibi lokumelana nokuhamba, i-stationary lap pool, ubhavu oshisayo, i-clubhouse yezinkanyezi ezinhlanu. enebha, umtapo wolwazi, indawo yokuqina, ithenisi, ibhola le-bocce, i-shuffleboard, ukubeka okuluhlaza, ibhola elikhukhulayo, izindawo zokuhamba nokunye okuningi! I-Seaglass Village inikezela ngemicimbi nemisebenzi eminingi, noma kuphi ukusuka ku-aerobics yamanzi ukuze uphile umculo nokudansa ku-clubhouse! Uma ungakuthandi ukushayela, akunankinga. Paka imoto yakho bese uyishiyela uhambo lweviki lokuzungeza i-Seaglass Village usebenzisa inqola yegalofu ye-Once Upon a Tide. Kukhona nesitobhi se-trolley khona kanye ngaphandle kwesango ukuze uhambe nawe nxazonke ze-Maine elisogwini elihle.
I-off-season izoletha injabulo ethule yolwandle oluhlanzekile lwaseMaine kanye nezindawo zokudlela eziningi, amabhishi namasiko. Kunemicimbi eminingana unyaka wonke ukuze wonke umuntu ayijabulele: Harvestfest, Ogunquitfest, Christmas By The Sea & Festival of Lights... ukukha nje ezimbalwa! Kukhona futhi ukushushuluza eqhweni, i-snowshoeing, i-brewery hopping, indawo ebanzi nezitolo zasendulo, imikhosi yezandla nokunye okuningi.
Once Upon a Tide ukuphunyuka obukufuna!
I-SOUTHERN MAINE'S SIGNATURE VACATION RESORT COTAGE
Lapha, Kuhlala Kuyimpelasonto!
Abavakashi bayo yonke iminyaka bangajabulela imisebenzi eyahlukene noma bavele baphumule ngokuthula nangokuthula kwalo mphakathi ophephile, onesango. Umkhawulo wejubane oqiniswe ngokuqinile we-15 mph uvumela ukuhamba noma ukuhamba ngebhayisikili nganoma yisiphi isikhathi sosuku.
I-Once Upon a Tide itholakala ngokukhethekileyo phakathi kwe-Wells ne-Ogunquit endaweni ebizwa ngokuthi yi-Moody. Le ndawo ivumela ukufinyelela okusheshayo (cishe imizuzu emibili) kuwo womabili amadolobha, futhi iyibanga elifushane nje lemizuzu eyishumi nanhlanu ukuya e-Kennebunkport nase-York.
Ngeke usibone kodwa sihlezi sikhona ngenxa yakho!
Hlola ezinye izinketho ezise- Wells namaphethelo